ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို အရှုံးပေးလိုက်ရသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင့်ဘက်တန် – စှယျစုံသုတ
ဖဆပလအဖွဲ့ကြီး မြေပေါ်ရောက်စအချိန်၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ပြန်အုပ်ချုပ်ချိန်ပေါ့ဗျာ။
ဖဆပလနဲ့ ကက်ဘိနက်အစိုးရနောင်ဂျိန်ချနေ တုန်းဆိုပါတော့။
အဲဒီအချိန်မှာ အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံချုပ် လော့ဒ်လူဝီမောင့်ဘက်တန် မြန်မာပြည်ကို လာတယ်ဗျာ။
ဒီတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မဟာမိတ်တပ်သားတွေ စုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့‘အိစ်အင်ဝက်စ်ကလပ်’က ကန်တော်မိတ် သဘင် (ယခုအိုရီယင့်ကလပ်) မှာ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတခု တည်ခင်းတယ်ခင်ဗျာ့။
”အဲဒီညစာစားပွဲမှာ ဖဆပလခေါင်းဆောင်ပိုင်း လေးငါးဆယ်ယောက်ကို ဖိတ်တယ်ခင်ဗျ။
မလွှဲသာလို့ ဖိတ်ရသလားမသိ ပါဘူးဗျာ။
ပေးထားတဲ့ နေရာတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတောင်မှ ချောင် ထဲ နောက်ဆုံးတန်းမှာ နေရာပေးထားတယ်။
အဲဒီထမင်းစားပွဲအပြီးမှာ အင်္ဂလိပ် ထုံးစံအတိုင်း ဂုဏ်ပြုစကား ထပြောကြတာပေါ့ဗျာ။
”အဲဒီအခါတုန်းက ရေပန်းစားနေတဲ့ ဆာပေါ်ထွန်း တို့၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါတို့ပေါ့ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုတော့ စကားပြောရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ စာရင်းမှာ ထည့်မထားဘူးဗျာ။
အဲဒီလိုစကား ပြောဆိုကြပြီး နောက်ဆုံး အစီအစဉ်အနေနဲ့ မောင့်ဘက်တန် က ပြန်လည်မြွက်ကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းတော်ခြွေတဲ့အလှည့် ရောက်လာရော ခင်ဗျာ့။
မောင့်ဘက်တန်ပြောတဲ့ စကားထဲမှာ ” နိုင်ငံရေးလောက ဆိုတာဟာ လူယုတ်မာတို့၏ ခိုကိုးရာဒေသဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားတလုံး ပါလာတယ်။
သူလည်း ပြောချင်ရာပြောပြီး ထိုင်လိုက်ရော ပရိသတ်ကြီးက လက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်း နဲ့ဩဘာပေး ကြတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလက်ခုပ်သံလည်းဆုံးရော….လားလား၊ ကျုပ်တို့ဗိုလ်ချုပ်က ချောင်ထဲက ဗြုန်းဆို မတ်တတ်ရပ်လိုက်တယ်။
မောင့်ဘက်တန် ထိုင်နေတဲ့ စားပွဲဆီလျှောက်လာခဲ့ပြီး အစီအစဉ်ထဲမှာ မပါဘဲနဲ့ မိန့်ခွန်းပြောပါလေရောဗျာ။
ပရိသတ်တွေကရော၊ စီစဉ်တဲ့လူတွေရော အားလုံး မျက်စိမျက်နှာပျက်ကုန်ကြတယ်။ လာတဲ့ပရိသတ်တွေ ကလည်း အလိုတော်ရိ ပရိသတ်တွေကိုး ခင်ဗျာ့။
အဲဒီထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်က ညစ်ထပ်ထပ် ကာကီဝတ်စုံဘောင်းဘီ အိတ်ကို လက်နှိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို မိန့်ခွန်းပြောပါလေရော။
ဒီအစီအစဉ်မှာ မပါတဲ့လူတယောက်က အခုလိုထပြီး ပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားတို့ ထုံးစံအရ တော်တော် ရိုင်းတယ်လို့ ထင်ကြမှာပဲ။
ရိုင်းတယ်ထင်လို့မက လဲ..သေသေ၊ ကျုပ်ကတော့ ပြောစရာရှိတာကိုပြောရမှာပဲ….
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီးရဲ့ သနားစရာကောင်းတဲ့ အဘိဓမ္မာကို ဝေဖန်ပြမယ့်အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ခန်းမကြီးတခုလုံး အပ်ကျသံတောင် ကြားရမတတ် ငြိမ်သွားပါတော့တယ်။
”နိုင်ငံရေးလောက ဆိုတာ လူယုတ်မာတွေ ခိုကိုးရာ ဒေသဖြစ်တယ်..လို့ ဘုရင်ခံချုပ်ကြီးက ပြောသွားပါတယ်။
ဒါဟာ အနောက်နိုင်ငံမှာတော့ မှန်ကောင်းမှန်မယ်။ ကျုပ်တို့အရှေ့နိုင်ငံ အယူအဆကတော့ ဘုရင်ခံချုပ် ကြီးခံယူချက်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
ကျုပ်တို့ဆီမှာ ပရဟိတလုပ်ငန်း၊ လောကတ္ထစရိယ ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်း၊ ဒါဟာဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မလုပ်နိုင်ဘဲ တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘုရားအလောင်းပုဂ္ဂိုလ်များသာ လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်း လို့ယူဆထားတယ်”….
(အဲ့ဒီအချိန် မှာ ပါဠိတွေ ဘာတွေရွတ်သေးတယ်)
”ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့အထဲမှာ တခါတရံလူယုတ်မာတွေ ပါကောင်းပါလာမယ်။ အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေး အလုပ်ဟာ မကောင်းဘူးလို့ ဆိုရတော့မှာလား။
ဥပမာတခု ပြောပါရစေ။ ဒီအဆောက်အအုံကြီးဟာ..
(အိုရီရင့် ကလပ်ကို ဆိုလိုသည်။) ” လူအများစုဝေးဖို့ ဆောက်ထားတယ်။
အစောင့်အကြပ်ကင်းမဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခါတစ်ခါ ခွေးတွေတက် အိပ်နေကြတယ်။ အဲဒီလိုခွေးတွေတက်အိပ်နေကြတာကိုကြည့်ပြီး ဒီအဆောက်အအုံကြီးဟာ ခွေး အိပ်ဖို့ ဆောက်ထားတာပါလို့ဆိုရင် မှန်ပါ့မလား၊ မမှန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးဟာလည်း ဒီလိုပဲ။ အင်မတန် မွန်မြတ်ပါတယ်။
အဆောက်အအုံကြီးပေါ်မှာ ခွေးတက်အိပ်သလို၊ လူယုတ်မာတွေလည်း အလစ်မှာ နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဝင်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး သမားစစ်စစ်တွေက ဒီလူယုတ်မာတွေ ကို မျက်ခြည်မပြတ် ဟန့်တားဝိုင်းပယ်နိုင်သည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံရေးလောကကြီးဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် မွန်မြတ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါပဲ….ကျုပ်ပြောချင်တာ ။” ဆိုပြီးကို သူ့နေရာသူ ခပ်တည်တည်ပြန်လာခဲ့တယ် ခင်ဗျာ။
မောင့် ဘက်တန်ကိုယ် တိုင်က နေရာကရပ်ပြီး လက်ခုပ်တီးဩဘာပေးတယ်။….. ဒီတော့မှ ပရိသတ်လည်း လက်ခုပ်တီးကြပါတယ်။
ပြီးတော့ မှ မောင့်ဘက်တန်က ” ဒီနေ့ည စကားပြောတဲ့အထဲမှာ အစီအစဉ်ထဲမပါတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မိန့်ခွန်း ဟာ အဖိုးတန်ဆုံးပါပဲ။
ကျွန်တော်ပြောမိတာကတော့ ထမင်းစားပွဲအပြီး ရယ်စရာ မောစရာအနေနဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ နိုင်ငံရေးလောကကို ပြက်ရယ်ပြုတဲ့စကား ပြောမိပါတယ်။ အလွန် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမိတဲ့အချက် အလက်တွေကို ရုပ်သိမ်းပါတယ် ခင်ဗျာ” ဆိုပြီးတောင်းပန် ယူရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ဖောက်သည်ချလိုက်ရ ပါသဗျို့”ဟူ၍ဖော်ပြထားသည်။
(ဒီနေရာမှာ ငါနဲ့မတူငါ့ရန်သူလို့ မသတ်မှတ်တဲ့ မောင့်ဘက်တန်ရဲ့ လူကြီးလူကောင်းဆန်ပုံကို တွေ့ရမှာပါ)
လော့ဒ်လူဝီမောင့်ဘက်တန် ဆိုတာက နယ်နယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယဘုရင်ခံချုပ်၊ အရှေ့တောင် အာရှမဟာမိတ်တပ်ပေါင်း စုစစ်သေနာပတိချုပ်ရေတပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊မြန်မာ့မြေပေါ်တွင်သာမက အရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်မှ ဂျပန်များကို တိုက်ထုတ်ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ၊ စစ်အပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဆက်လက်ထားရှိ ဖွဲ့စည်းရေးကို ခွင့်ပြုခဲ့သူ၊ ဝိတိုရိယ ဘုရင်မကြီး၏မြေး၊ ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီး၏ဦးရီးတော်.. စသည်ဖြင့် ဂုဏ်ရှိန်ကြီးမားသူ ဖြစ်သည်။
ဒူးမထောက်၊ လက်မမြှောက် သတ္တိမျိုးရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရသူ က မောင့်ဘက်တန်ပင် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။